पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको योजना कार्यान्वयनमा, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमले लियो गति :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको योजना कार्यान्वयनमा, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमले लियो गति
कमला गुरुङ बिहीबार, मंसिर २३, २०७८, २०:४७:००
काठमाडौं - विद्यार्थीलाई सामान्य चोपटक लाग्दा पनि अस्पताल लानुपर्ने बाध्यता थियो। कुनै स्वास्थ्य समस्या आइपरे चिकित्सकलाई गुहार्नु पथ्र्यो। कतिपय बेला त एक्कासी आउने समस्याले पढाई नै प्रभावित हुन्थ्यो भने छात्राहरु महिनावारी भएको बेला कक्षामा अनुपस्थित समेत हुन्थे।
तीन वर्ष पहिले काठमाडौं डिल्लीबजारको पद्मकन्या माविका प्राचार्य रिता तिवारीले झेल्नु परेका समस्याहरु हुन् यी। तर जबदेखि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू भयो, त्यसदिन देखि उनलाई यस्ता समस्याले सताउने गरेको छैन।
उनी भन्छिन्, ‘विद्यार्थीलाई केही स्वास्थ्य समस्या आउँदा अस्पताल लानु पथ्र्यो। साधारण चोटपटक लाग्दा पनि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। तर अहिले विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू भएपछि धेरै सहज भएको छ।’
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम लागू भएपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी आइपर्ने समस्या समाधानका लागि निकै सहज भएको प्राचार्य तिवारीले बताइन्।
प्राचार्यको आडमै विद्यालय नर्सको एउटा कोठा छ। कोठा भित्र एउट बेड, दराई छन्। दराज भित्र ज्वरो नाप्ने थर्मोमिटर, फस्ट एड बक्स, प्याड, जीवनजल लगायत स्वास्थ्य सामग्री छन्।
उक्त विद्यालयमा ९ सय छात्राहरु छन्। कार्यक्रम लागू भएपछि महिनावारीमा अनुपस्थित हुने छात्राहरुको संख्या पनि कम भएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘छात्राहरुलाई अहिले हामीले प्याड पनि उपलब्ध गराउँछौ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरु महिनावारी हुँदा घर जाने वा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने अवस्था छैन।’
विद्यार्थीहरुले बाहिरी जंक फुड खान समेत बन्द गरेका छन्। जंक फुडलाई बन्द गर्न विद्यालय नर्स अनुराधा तिवारीले रमाइलो नियम समेत बनाएकी छिन्।
हरेक कक्षामा एक जना लिडर राखिएको छ। जसले कक्षामा कुनै विद्यार्थीले जंक फुड खाएको थाहा पाउने बित्तिकै विद्यालय नर्स तिवारीलाई खबर गर्छन्। उनले सुझावमा विद्यार्थीहरुलाई क्यान्टिनमै हरेक दिन फरक फरक खाजा बनाईन्छ। चिउरा तरकारी, फलफूल, राजमा, गेडागुडी, आलु पराठा लगायत स्वस्थपूर्ण खाजा विद्यालयमै बनाइने गरेको प्राचार्य तिवारीले बताइन्।
‘विद्यालय नर्सले अहिले जंक फुड खान नै बन्द गरिदिनु भएको छ। विद्यार्थीलाई कुन बार के खाजा दिने भनेर उहाँले लिस्ट नै बनाउनु भएको छ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले स्वस्थ र सफा खाजा खान पाएका छन्’ उनले भनिन्।
विद्यालय नर्स कार्यक्रमबाट विद्यार्थी मात्र नभई अभिभावकहरु पनि सन्तुष्ट रहेको उनले बताइन्। प्रत्येक विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाको रेकर्ड समेत राखिएको छ। यसले गर्दा कुन विद्यार्थीलाई के स्वास्थ्य समस्या छ भनेर थाहा पाउन सहज भएको उनले बताइन्।
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम प्रत्येक विद्यालयमा लागू हुनुपर्ने उनको बुझाई छ। विद्यार्थीको स्वास्थ्य राम्रो नभएरसम्म शिक्षा पनि राम्रो नहुने उनको भनाई छ।
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सुरु गरेका थिए। उनले उक्त कार्यक्रम सुरु गर्नुको मुख्य दुई उद्देश्य थियो।
एक, विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउन प्रेरित गर्ने।
दोस्रो, विद्यालयमै आइपर्ने स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्ने।
उक्त कार्यक्रमलाई सबैभन्दा पहिले बागमती प्रदेशले सुरु गरेको थियो। १३ जिल्लाका २० सामुदायिक विद्यालयमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु भएको थियो। कुल १ हजार ५२२ विद्यालय रहेको बागमती प्रदेशमा हाल ३५९ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम लागू भइसकेको बागमती प्रदेशको विद्यालय नर्सिङ संयोजक बिनु कक्षपतीले जानकारी दिइन्।
चालु आर्थिक वर्षमा थप ९९ वटा विद्यालयमा कार्यक्रम लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आवश्यकता अनुसार अन्य विद्यालयहरुमा पनि कार्यक्रम थप गर्दै जाने उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘२०७५ सालमा हामीले २० वटा सामुदायिक विद्यालयमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट राम्रो नतिजा आएपछि यो कार्यक्रम थप गर्दै गएका हौँ। र, आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम थप गर्दै जान्छौ।’
कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका प्रत्येक विद्यालयहरुमा नर्सको तलब, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री खरिद लगायतका लागि यो वर्ष ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बजेट पठाइएको छ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अनुसार हाल देशभर ६७ हजार ५०९ जना स्टाफ नर्स छन्। देशभर रहेका विद्यालयहरुमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्टाफ नर्सहरु पर्याप्त रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ सुरक्षा तथा सामाजिक महाशाखाककी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक बाला राईले बताइन्। उनका अनुसार हाल देशभर ६ सय बढी विद्यालय नर्स छन्। तर कुन प्रदेशमा कति विद्यालय नर्स छन् भन्ने बारे भने महाशाखासँग यकिन तथ्यांक छैन।
नेपालमा एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम निकै महत्वपूर्ण भएको उनले बताइन्। स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन र स्वस्थ समाज निर्माणका लागि यो कार्यक्रम आवश्यक भएको उनको भनाई छ।
उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई मात्र फाइदा गर्दैन। उसको परिवारमा पनि यसले राम्रो प्रभाव पार्छ। अन्तत यसले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनका लागि समुदायलाई नै प्रेरित गर्छ।’
कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे मूल्यांकन गर्न हाल महाशाखाले ‘स्कुल हेल्थ इन्फरमेशसन सिस्टम’ नामको एक सफ्टवेयर बनाउने काम गरिरहेको छ। उक्त सफ्टवेयरमा विद्यार्थी, नर्स लगायत विद्यालयको जानकारीहरु राखिन्छ।
‘स्कुल हेल्थ नर्स कार्यक्रमको प्रभावक के छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले के कस्तो सुधार गर्‍यो ? भन्ने रेकर्ड हुन्छ।’ उनले भनिन्, ‘साथै स्कुल नर्सले कति वटा परामर्श दिए। के के गरे। विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था सबै त्यस सफ्टवेयरमा राखिन्छ।’
यो कार्यक्रम थप विस्तार गर्दै लैजानुमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँदै उनले भनिन्, ‘स्थानीय सरकारले यो कार्यक्रमलाई अपनत्व लिनुपर्छ। हाम्रो विद्यालयमा पनि यो कार्यक्रम आवश्यक छ भने र यसको महत्व बुझ्नुपर्छ। यदी स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनु भएन भने कार्यक्रम सफल नै हुँदैन।’
पैदल हिँडिरहेका डाक्टर कुट्ने ट्राफिक प्रहरी निलम्बित १९ मिनेट पहिले